RadioApp yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
RadioApp yemahara kwenguva shoma
Kunyangwe uri Mugovera, pakupera kwevhiki tinopawo maficha kana mitambo inowanikwa kuti utore mahara. Ino nguva yatinotaura nezvayo chikumbiro chekuteerera redhiyo zvakananga kubva ku iPhone yedu. Kusiyana nezvimwe zvinoshandiswa, mune runyorwa rwunoonekwa mukati medu isu tinofanirwa kusarudza zviteshi maererano nezita ravo. RadioApp inotibvumidza isu pachedu kufananidza kuwanda kwenzvimbo yatinoda kuteerera. Uye zvakare, nekuda kwekutonga kweEarPods, isu tinogona zvakare kutsvaga zviteshi zvakananga tisina kutora iyo iPhone kubva muhomwe yedu kuti tidaro.
Asi kana tiri kufamba kune imwe nyika, tinogona kusarudza nhepfenyuro dzenyika yedu yekuzvarwa kuti tigare tichiziva. Muchiitiko chekuve chiteshi cheredhiyo chaicho, uko mimhanzi inonyanya kutererwa, kana sevhisi ichienderana, zita rerwiyo rwuri kutamba rucharatidzwa pachiratidziro che iPhone yedu.
RadioApp inotitendera seta zviteshi zvakasiyana sevanofarira kuitira kuti tirege kuenda kunovatsvaga pese patinomhanyisa kunyorera. Kana tichida kumuka newairesi, chishandiso ichi chinotitenderawo kugadzirisa iyo iPhone kuitira kuti redhiyo ivhurwe panguva yakatarwa, izvo zvisingade kushandiswa kwemahedhifoni kuuteerera. Asi kana zvichipesana, isu tichida kuenda kunorara tichiteerera kumimhanzi, tinogona zvakare kuseta timer kuitira kuti idzime zvoga mune iyo nguva yatinoona.
1 RadioApp Zvimiro
2 RadioApp ruzivo
Yakakosha analog analog FM / AM tuner
Shandisa iri kure kutsvaga zviteshi
Inotsigira nyika dzakawanda panguva imwe chete
Zita rerwiyo rwuri kutamba parizvino kana ruripo
Kugadziridza kwekupedzisira: 20-04-2016
Saizi: 10.8 MB
Mitauro: Spanish, German, Simplified Chinese, Chinese Chinese, Korean, French, Hebrew, English, Italian, Japanese, Dutch, Portuguese, Russian, Thai, Turkish, Arabic.
Rated kwemakore mana zvichikwira.
Kugarisana: Inoda iOS 8.0 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » RadioApp yemahara kwenguva shoma
cesar fierro akadaro
Ndinoiwana sei mahara?
Pindura kuna cesar fierro
IOS 9 yekugamuchirwa mwero inosvika 86%